Xog-hayaha Qaramada Midoobay oo ka xun yahay in ergeyga Soomaaliya laga eryo, wuxuu soo magaacabi doonaa Ergay cusub – Walaal24 Newss
January 4, 2019	1	By walaal24
Warbixin uu soo saaray ku xigeenka af-hayeenka xog-hayaha guud ee Qaramada Midoobay, ayaa lagu sheegay in Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa magacaabi doona Ergayga cusub ee Soomaaliya, ka dib markii uu ku fashilmay inuu ku qanciyo Dowladda Soomaliya in uu ka noqdaan dibna u dhigaan go’aankoodii ahaa inay ka eryaan wakiilka QM ee lagu eedeymaha faragelinta.
Maaddaama wasaaradda arrimaha dibedda ee Soomaaliya ayaa shaacisay Talaadadii in UN ka. Haysom “ma shaqeyn karo waddankan,” Guterres ayaa laba jeer la hadlay soomaaliya Maxamed Cabdullaahi, Ayuu yiri afhayeenka Farhan Haq.
“Xoghayaha guud wuxuu si qoto dheer uga qoomameeyay go’aanka Dowladda Federaalka Soomaaliya,” ayuu yiri Haq. “Xoghayaha Guud wuxuu kalsooni buuxda ku qabaa Mr. Haysom.”
Haq wuxuu xusay in caqiidada shakhsiyaadka aan shuruudaha lahayn aysan khuseynin shaqaalaha Qaramada Midoobay.
“Isla mar ahaantaana Xoghayaha Guud wuxuu gebi ahaanba ka go’an xaqiijinta in baahida dadka Soomaaliyeed waxay ku jiraan kaalinta hore ee shaqada Qaramada Midoobay ee Soomaaliya,” Ayuu yiri Haq. “Sidaa darteed, wuxuu doonayaa inuu magacaabo Wakiilka Gaarka ah cusub ee Soomaaliya.
Afhayeenka waxaa kaloo uu sheegay in Go’aanka Dowladda ay u jartay Wakiilkoodii Soomaaliya u joogay ee ah (Persona Non Grata) uusan qaban Hay’adaha UN-ka sidoo kalena loo isticmaali karin sida uu qabo heshiiska Diblomaasiyadda ee Vienna.
Madaxweyne Farmaajo oo xil ka qaadis ku sameeyay Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka JFS
Madaxweynaha JFS oo Warqadaha Aqoonsiga Danjirenimo ka guddoomey Safiirka cusub ee Dalka Serbia
Sadax dhalinyaro oo werarkii Hotel Naasa-Hablood2 ka danbeysay oo dil toogasha ah lagu fuliyay